नवदुर्गाको पूजा कुन राशि भएकाले कसरी गर्ने ?
६ आश्विन २०७४
हिन्दूहरुको महान् चाड दशैँ सुरु भइसकेको छ । दशैँमा नौ दिनसम्म नवदुर्गाको पूजाआजा गरिन्छ । दुर्गामा विश्वास गर्नेहरु उनको नौ रुपलाई नौ दिनसम्म स्मरण गर्छन् । तर, नवदुर्गाको पूजा गर्नेले आफ्नो राशिअनुसार ध्यान पुर्याउँदा राम्रो हुन्छ : मेष यो राशि भएकाहरुले स्कन्द माताको पूजाअर्चना गर्नुका साथै दुर्गा चालिसाको पाठ गरे राम्रो हुनेछ । यसो गर्दा दुर्गा खुसी भएर राम्रो फल प्राप्त हुनेछ । वृष यो…विस्तृत समाचार »
आज भन्दा १ सय ५९ वर्ष अघि विक्रम संवत् १९०६ साल माघमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणा २५ जनाको टोली सहित वेलायत प्रस्थान गरेका थिए । विश्व साम्राज्य वेलायतसँगको सम्बन्ध विस्तार गर्न राजा सुरेन्द्रको विशेष दुत बनेर उनी वेलायत पुगेका थिए । जंगबहादुर झण्डै ३ महिना वेलायत बसे । फ्रान्स हुँदै स्वदेश फर्केका जंगबहादुरको वेलायत र पेरिस बसाई निकै चर्चित बनेको त्यसबेलाका विभिन्न लिखतमा पाईन्छ ।…विस्तृत समाचार »
आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी नेपालमा पनि मनाइएको छ । भगवान विष्णुका अवतार कृष्ण लिलाको बारेमा तपाईले धेरै कुरा सुन्नुभएकै होला, अथवा टेलिभिजनहरूमा देख्नुभएकै होला । के तपाईले श्रीकृष्णको गुरूको बारेमा सुन्नुभएको छ । उनीसँग जोडीएका कथाहरु पढ्नुभएको छ ? कृष्ण जन्माष्टमीमा भगवान् कृष्ण सँग जोडीएका केहि कुराहरु जान्नुहोस् । जुन अचम्मलाग्दा छन् अथवा तपाईले पहिल्यै नसुन्नुभएको हुनसक्छ । १. भगवान कृष्णका कुल १०८ नामहरु छन्…विस्तृत समाचार »
२३ साउन, काठमाडौं । आज यो वर्षको पहिलो चन्द्रग्रहण लाग्दैछ । नेपालमा सोमबार राति ११ बजेर ७ मिनेटमा सुरु हुने चन्द्रग्रहण राति एक बजेर चार मिनेटमा सकिने छ । यो चन्द्रग्रहण नेपालसहित दक्षिण र पूर्वी एशियाका देशमा तथा अष्ट्रेलिया, अफ्रिका र सम्पूर्ण यूरोपबाट देख्न सकिने बताइएको छ । चन्द्रग्रहण राति ११ बजेर ७ मिनेटमा सुरु भए पनि दिउँसो २ बजेदेखि नै कुनै पनि भोजन गर्न…विस्तृत समाचार »
भगवान शिवको रुपलाई देखेपछि अलौकिक अनुभव हुन्छ । हाम्रो दिमागमा उनले आफ्नो शरिरमा केहि बिशेष कुराहरुको धारण किन गरेका होलान् भन्ने कुराको विचार पनि आउँछ । उनको हातमा त्रिशुल, किन बाँधिएको छ यसमा डमरु, उनको घाँटीमा नाग किन झुण्डिएको छ, जस्ता कुराहरुको जिज्ञासा सबैलाई लाग्न सक्छ । त्रिशुलः भगवान शिवको त्रिशुल तीन शक्तिहरुको प्रतीक हो । ज्ञान, इच्छा अनी परिपालन । डमरुः शिवजीको त्रिशुलमा…विस्तृत समाचार »
​श्रीमद्भगवद्गीताका यी श्लोक, जसले देखाउँछन् जीवनयापनको श्रेष्ठ बाटो
सनातन हिन्दु संस्कृतिमा श्रीमद्भगवद्गीता न केवल पूज्य छ, त्यो भन्दा बढी अनुकरणीय पनि छ । भनिन्छ, श्रीमद्भगवद्गीता ग्रन्थमा उल्लेखित उपदेश स्वयं भगवान श्रीकृष्णको मुखबाट निस्केको अमृतवाणी हुन्, जसले जीवनलाई सही ढंगबाट अघि बढाउने श्रेष्ठ बाटो देखाउँछन् । प्रस्तुत छ, यस महान् दार्शनिक गन्थबाट छानिएका केही महत्वपूर्ण श्लोक : नैनं छिद्रन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः । न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत ।। (दोस्रो अध्याय, श्लोक २३)…विस्तृत समाचार »
​शनिवारको दिन भुलेर पनि नगर्नुहोस् यि पाँच चिजहरुको किनमेल
यदि तपाई शनिवारको दिन शपिङ गर्नुहुन्छ, या खाद्यान्नको किनमेल गर्नुहुन्छ भने ख्याल गर्नुहोस् कतै तपाईले गरीरहेको किनमेलबाट शनि देवताको अपमान त भइरहेको छैन । शास्त्रमा केहि यस्ता चिजहरु उल्लेख गरीएको छ जसको शनिवार किनमेल गर्नु उत्तम मानिँदैन । बिशेषगरी बस्तु फलामको छ भने त्यसको किनमेल नगर्नु नै बुद्धिमानी हुन्छ । यस्ता छन् शनिवार किनमेल गर्न नहुने बस्तुहरु १. फलामको किनमेल फलामलाई शनिदेवको धातु मानिन्छ ।…विस्तृत समाचार »
​भगवान शिवका अनुसार मृत्युका यि सात संकेतहरु, तपाई पनि जान्नुहोस्
४ अषाढ २०७४
मृत्युसँग सबै डराउँछन् । कसको मृत्यु कुनबेला हुन्छ, कसैलाइ थाहा नै हुँदैन । आफ्नो मृत्यु कतिखेर हुन्छ भन्नेकुरा सबैले जान्न चाहान्छन् । तर कुनै यस्ता संकेतहरु छन्, जसले मृत्यु आउनुभन्दा पहिले नै चेतावनी दिन्छन् की अब उ धर्तिमा रहने केहीदिनहरु मात्र बाँकी छन् । सायद तपाईलाइ विश्वास नहोला यि कुराहरु भगवान् शिवले स्वयं बताएको धार्मिक विश्वास रहेको छ । शिवमहापुराणमा भगवान शिव स्वयंले पार्वतिलाइ बताएका…विस्तृत समाचार »
नेपालमा राजतन्त्रको समूल अन्त्य भइसकेको छ । राजदरबार हत्याकाण्डमा राजा बीरेन्द्रको बंश नै नास भएको केही वर्षमा देशबाट पुरै राजतन्त्र बिदाई भयो । दरबार हत्याकाण्डको मुख्य डिजाइनर या त्यसमा संलग्न व्यक्ति को हो भन्ने आधिकारिक पुष्टी अहिलेसम्म भएको छैन । हत्याकाण्डलगत्तै दरबारले पूर्वयुवराज दीपेन्द्रले अन्धाधुन्धा गोली चलाएर आफ्ना बाबुआमालगायतलाई मारेको र अन्त्यमा आफैलाई पिठ्युँबाट पेस्तोल दागेर आत्महत्या गरेको सार्वजनिक गरेको थियो । तर, त्यसपछि भने…विस्तृत समाचार »
इतिहासमा नेपाल एकीकरण अभियानका नायकका रूपमा चिनिएका राजा पृथ्वीनारायण शाहको डरलाग्दो रुप कतिपयलाई थाहा नहुन सक्छ । उनी एकदमै क्रुर स्वभावका पनि थिए । आफूले भनेको काम पूरा नभए घनघोर रिसको ज्वाला प्रकट गर्दथे । राज्य चलाउन कुशल र निडर व्यक्तित्वको धनी भए पनि उनी रिस उठेको वेला कसैलाई बाँकी राख्दैनथे । आफ्ना नातागोतालाई त तथानाम भन्ने नै भए, रिसाएको वेला सेनापति कालु पाण्डेलाई समेत…विस्तृत समाचार »